Xiisad Dagaal oo aad u xun ayaa ka taagan Degmadda Baardheere - Awdinle Online
Home News Xiisad Dagaal oo aad u xun ayaa ka taagan Degmadda Baardheere
Xiisad Dagaal oo aad u xun ayaa ka taagan Degmadda Baardheere
December 24, 2019 (AO) – Degmada Baardheere ee gobolka Gedo waxaa caawa ka taagan xiisad dhanka maamulka degmada ah oo u dhaxeysa xubno kala taabacsan maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka.
Xaaladda hada taagan ayaa ah mid cirka isku shareertay ka dib markii uu maanta Baardheere gaaray nin dhawaan madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland u magacaabay gudoomiye ku-xigeenka degmadaas Baardheere iyo xubno kale oo ka baxay magaalada Kismaayo.
Guddoomiye ku-xigeenka ay degmadaas u magacaawday Jubbaland ayaa waxaa la sheegay in uu maanta xarunta degmada ku soo dhaweeyey Sheekh Maxamed Xuseen isxaaq Al-qaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo.
Maanta gelinkii dambe ayaa ciidamada Itoobiya iyo kuwa Militeriga Soomaaliya ee ku sugan degmada Baardheere waxay hawada ka saareen is gaarsiinta degmadaas, waxayna magaalada ka bilaabeen howlgalo ay doonayeen in ay ku soo qabtaan xubnihii ka socday Jubbaland ee maanta tegay Degmadda Baardheere.
Wali lama sheegin cid lagu soo qabtay howlgalkaas, balse amarka soo qabashada xubnaha ka yimid jubaland ayaa waxaa bixiyey dowladda federaalka, sida uu sheegay Cabdullaahi Nuur Xasan oo ah gudoomiyihii degmada Baardheere ee xilka uu ka qaaday maamulka Jubbaland oo hada ku sugan Xamar.
Cabdullahi Nuur waxa uu sheegay in dowladu ay amartay ciidanka jooga Baardheere in lasoo qabto gudomiye ku-xigeenka gobolka Al-qaadi oo ah ninka xiisadda abuuray iyo xubnihii uu magaalada ku soo dhaweeyey ee ka socday Jubbaland, kuwaas oo uu sheegay inay haatan isku aruursadeen guri uu Al-Qaadi ka deganyahay Baardheere.
Ex Gudoomiye Cabdullaahi Nuur Xasan ayaa ka mid ahaa guddoomiyaashii degmooyinka gobolka Gedo ee hoos tagi jiray Jubbaland, balse markii danbe la saftay dowladda federaalka, sidaasna Jubbaland ay xilalkii uga qaaday.
Previous articleAlgeria’s Powerful Army Chief Dies at Pivotal Point in Political Crisis
Next articleSawiro: Imaaraadka iyo Eritrea oo ka wada hadley Xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya